Ntupu V +
Akwụkwọ ikike Okwu
Anyị bụ ndị mpako na-ewetara ndị "CANNAPRESSO" ika, na 100% hemp ewepụtara CBD (cannabidiol) ngwaahịa, aiming abara gị uru na aka a mma vaping ahụmahụ.
CANNAPRESSO bụ a pụrụ iche ika nke eke hemp dabeere CBD ngwaahịa si California, àjà elu uche CBD ewepụtara ụlọ ọrụ hemp, nke bụ iwu na niile 50 na-ekwu.
Gịnị bụ CBD
Gịnị bụ CBD?
CBD dị mkpụmkpụ maka Cannabidiol, ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị a ma ama ndammana-ewere ọnọdụ cannabinoid akụrụngwa na afọ osisi. N'adịghị ka ọzọ ma ama molekul, tetrahydrocannabinol (THC), CBD bụ kpam kpam na-abụghị na-emetụta uche na mgbe na-eme ka ị na-eche "dị elu". Ọ bụ ezie na CBD bụ nnọọ otu n'ime n'elu 60 cannabinoids dị na afọ osisi, ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị ọmụmụ gosiri na CBD nwere kasị ukwuu ọgwụgwọ nwere nke niile cannabinoids.
Gịnị bụ ntupu V +
Ntupu V + nwere ike n'ụzọ zuru okè na-emebisi ihe bioacitivity nke CBD na jirichaa uru nke CBD. anyị creatively eji ntupu nebulizer ka eloda CBD, nke ụzọ CBD Natural bioavailability nwere ike n'ụzọ zuru okè ichekwa, n'okpuru highfrequency vibration nke Micro ntupu nebulizer, amị 2.5 μm-3.5 μm n'obosara ahụ ozugbo na akpa ume mucosal ọbara arịa, akpa ume akwara absorption ukwuu mma CBD absorption ọnụego.
Mere CBD bụ iwu?
Dị ka 2014 Farm Bill aka site na President Barack Obama, Nkebi 7606 nke 2014 Farm Bill ikike uto na cultivation nke ulo oru hemp, site na nke CBD ostensibly erite.
M ga-enweta AKWA SITE CBD
Mba anyị Hemp wepụ ngwaahịa na-niile mere si ulo oru hemp, nke naanị nwere Chọpụta ichekwa THC, ya mere ọ dịghị emetụta uche mmetụta si ewere anyị na. Ọ bụ THC na bụ na-emetụta uche akụrụngwa nke afọ.
Okwu: 202 North California Ave, City of Industry ca 91744 USA
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla banyere ngwaahịa na ngwaahịa ahịa, biko ahapụ ozi n'okpuru, anyị ga-aza n'ime 24 awa
FDA ngosi : Ndị a na ngwaahịa na okwu adịghị inyocha site FDA ma na-adịghị bu n'obi ịchọpụta, na-emeso, gwọọ ma ọ bụ gbochie ọ bụla ọnọdụ, aghara, ọrịa ma ọ bụ nke anụ ahụ ma ọ bụ iche echiche ọnọdụ. Ngwaahịa a bụ bụghị a na ise siga cessation ngwaahịa na bụghị e anwale dị ka ndị dị otú ahụ. The FDA bụghị inyocha nchekwa nke ngwaahịa a ma ọ bụ ihe ọ bụla nke kwuru site na emeputa. Ngwaahịa a na-aduak maka site na mmadụ nke iwu afọ na ndị okenye, ọ bụghị site ụmụ, ma ọ bụ ụmụ nwanyị dị ime ma ọ bụ ara, Always chọpụta na dọkịta gị tupu ịmalite a ọhụrụ dietary emeju mmemme.
Legal Disclaimer : CANNAPRESSO anaghị Nlụpụta, ere ma ọ bụ kesaa ọ bụla na ngwaahịa ndị na-na mebiri nke United States na-achịkwa bekee Act (US.CSA). Cannabidiol (CBD) bụ eke constituent nke hemp mmanụ.
Ọ bụghị n'ihi na ire ere mmadụ n'okpuru afọ 18